स्वस्थ्यकाे लागि वेस्ट, “ग्रीन टि” -
स्वस्थ्यकाे लागि वेस्ट, “ग्रीन टि”
जब घरमा आगन्तुक आइपुग्छन् भन्ने गरिन्छ, ‘ल चिया पिउँ ‘ । तर, आगन्तुकको डिमान्ड फरक हुन्छ । भन्छन् ‘ग्रीन टि भए अझ राम्रो ।’ हामीले भन्ने ‘चिया’, जसमा दुध, चिनी मिश्रण गरिएको हुन्छ । चिया चाहि दानादार अर्थात सिटिसी । दुध, चिनी मिश्रति चियाको लत लागेका हामी अहिले ‘ग्रीन टि’मा र्फकदैछौं । खासमा ग्रीन टि अर्थात हरियो चिया नै खास चिया हो । र, यसमै चियाको असली स्वाद पाइन्छ । असली चिया भन्नाले चियाको मुना जतनसाथ टपक्क–टपक्क टिपेर होशियारीपूर्वक तयार गरिएको चिया हो, ग्रीन टि । ग्रीन टि किन खाने ? यसबारे त त्यती बताइरहनु पर्दैन । किनभने सबैलाई यसको स्वस्थ्य लाभ थाहा छ ।
ग्रीन टिको सेवन जति स्वस्थ्यवर्द्धक छ, उत्तिकै सजिलो छ बनाउने काइदा पनि । न दुध र चिनी खोज्नुपर्ने, न ल्वाङमरिच पिस्नुपर्ने । न चिनी बढी हुने डर, न दुध पातलो हुने । पानी उमाल्यो । ग्रीन टि राखिएको गीलासमा खन्याइदियो । बस, ग्रीन टि तयार । हेर्दा पनि राम्रो, पिउँदा पनि स्वस्थ्यवर्द्धक । यसले हाम्रो भान्सालाई किफयाती र सहज पनि बनाइदिएको छ । त्यसैले अहिले पाहुनापात आउनसाथ ग्रीन टि टक्य्राउने गरिन्छ ।
ग्रीन टि खासमा एन्टि अक्सिडेन्टको स्रोत हो । कप एन्टिअक्सिडेन्टले भरिपूर्ण हुन्छ जसले मुटुसम्बन्धी रोग लाग्न दिँदैन, मस्तिष्कको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउँछ र क्यान्सर हुने सम्भावना कम गराउँछ । ग्रीन टिमा एपिगलोकेटेशिन ३ गलेट जस्ता तत्व हुन्छन, जसले क्यान्सरको कोशिकालाई बढ्न दिदैन । ग्रीन टिले क्यान्सरको जोखिम २५ प्रतिशतसम्म कम गर्ने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा पनि ग्रीन टि प्रभावकारी मानिन्छ । त्यसैले अहिले चिकित्सकहरुले पनि यसका रोगीलाई ग्रीन टि पिउने सल्लाह दिन्छन् । शरीरको खराब कोलोस्टोर नियन्त्रणमा ग्रीन टि लाभदायक हुन्छ । पाचन यन्त्रलाई तन्दुरुस्त राख्नदेखि छालालाई नरम र चम्किलो बनाउनसम्म ग्रीन टि उपयोगी हुन्छ । तौल नियन्त्रणका लागि समेत ग्रीन टि पिउन सकिन्छ । ग्रीन टि स्वास्थ्यका लागि कति हितकारी छ भन्ने कुरामा त अध्ययन अनुसन्धान भएको छ । त्यसको निचोड के छ भने, ग्रीन टि समग्र शरीरको लागि अमृत समान हो ।
रोगले ढ्याङ्ग्रो ठोकेपछि ग्रीन टि
खासगरी जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगले गाँज्दै लगेपछि ग्रीन टि पिउने क्रम पनि बढेको हो । अहिले खराब खानपान र जीवनशैलीका कारण हामीलाई कोलोस्टोरले सताउन थालेको छ । मधुमेहले दुख दिन थालेको छ । उच्च रक्तचापले तर्साउन थालेको छ । क्यान्सरले भयभित बनाउन थालेको छ । यी सम्पूर्ण रोगको जोखिमबाट बच्नका लागि ग्रीन टि उपयोगी मानिदै आएको छ । अहिले ट्रेन्ड नै छ, ग्रीन टि पिउने । विगतमा चीनबाट ग्रीन टि नेपाली बजारमा आइपुग्थ्यो । ति महंगा हुन्थे । ग्रीन टिप्रति अहिलेको जस्तो सचेतना पनि थिएन । अहिले नेपालमा ग्रीन टि उत्पादन हुन्छ । नेपाली ग्रीन टि विश्व बजारमा निर्यात पनि हुँदै आएको छ । यससँगै धेरैजसोको भान्सामा ग्रीन टि भित्रिएको छ । दिनमा एक, दुई कप भएपनि ग्रीन पिउनैपर्छ भन्ने चेतना सबैमा छ ।
मिल्क टि भर्सेस ग्रीन टि
ग्रीन टि पिउने कि मिल्क टि ?
धेरैजसोले एकक्षण पनि नसोची भन्न थालेका छन्, ‘ग्रीन टि ।’
मिल्क टि अर्थात दुधको चियाले क्षणभरलाई जिब्रोको स्वाद दिन्छ । तर, त्यही चिया घाँटीबाट भित्र प्रवेश गरेपछि विषालु बन्छ । दुध, चिनी र रसायनयुक्त चियाको मिश्रणले शरीरलाई हानी गर्ने नै भयो । ग्याष्ट्रिक रोगीलाई त यो विष समान नै हो । कतिपयको बानी के हुन्छ भने, विहान उठ्नसाथ दुध चिया घुट्काउने । उनीहरुलाई ग्याष्ट्रिकको समस्या हुन्छै हुन्छ । दुध चिया एक किसिमको लत हो । कतिपय भन्ने गर्छन्, ‘दुध चिया नखाई चित्तै बुझ्दैन ।’ तर, चित्त भन्दा ठूलो स्वास्थ हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । चित्त त जसो गरे पनि बुझाउने कुरा हो । यद्यपी शरीरमा रोग लाग्यो भने ? त्यसैले ग्रीन टि पिउनुहोस् । सर्वोत्तम विकल्प हो यो । दुध चियाको लागि आवश्यक सामाग्री जुटाउने, पकाउने झन्झटबाट पनि मुक्त हुने, संभावित रोगबाट पनि । त्यसैले दुधको चिया छाडेर जिब्रोलाई ग्रीन टिमा अभ्यस्त बनाउनुपर्छ ।
शंका छैन, ग्रीन टिले स्वास्थलाई फाइदै फाइदा गर्छ । ग्रीन टि पिउने बाहनामा हामीले पर्याप्त मात्रामा तरल पर्दाथ पनि ग्रहण गर्छौं । यसले शरीरका टक्सिन अर्थात विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न पनि मद्दत गर्छ । वास्तवमा टक्सिनले हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्यामा पार्ने हो । ग्रीन टि फाइदाजनक छ भन्दैमा त्यसको विधी नबुझी पिउनु त्यती प्रभावकारी नहुन सक्छ । किनभने यसको पनि आफ्नै काइदा छ, पिउनका लागि । सकेसम्म ताजा ग्रीन टि, जो खुला पाइन्छ, त्यही राम्रो हुन्छ । यस्तो ग्रीन टि काँचको भाँडो वा माटोको भाँडोमा राखेर पिउनु बढी स्वस्थ्यकर मानिन्छ । ग्रीन टि बनाउनका लागि विशेष किसिमको भाँडो नै पाइन्छ । यस्ता भाँडोमा ग्रीन टि बनाएर पिउँदा राम्रो र सजिलो हुन्छ ।
पहिलो पटक पानीले पखालौं
जब भाँडोमा आवश्यक मात्रामा ग्रीन राखिन्छ, पहिलो पटक केही पानी हालेर उक्त पानी फ्याक्नुपर्छ । यसले ग्रीन टिमा भएका फोहोर, धूलो आदि पखालिन्छ । दोस्रो पटक पानी हालेर केही समय छोप्नुपर्छ ।
सानो कचौरामा पिउने
अक्सर हामी ठूलो मग वा गिलासमा राखेर चिया पिउने गर्छौं । तर, ग्रीन टि पिउनका लागि विशेष किसिमको स–सनो कचौराको सेट पाइन्छ । त्यस्ता सेट काँच वा माटोको हुनसक्छ । यस्ता कचौरामा थोरै थोरै चिया राखेर पिउनुपर्छ ।
तात्तातो होइन, मनतातो
हामी चिया भन्नसाथ धेरै तातो पिउने गर्छौं । तर, धेरै तातो पिउँदा शरीरको तापमानसँग त्यसको सन्तुलन मिल्दैन । त्यसैले मनतातो बनाएर पिउनु बढी फाइदाजनक छ ।
ग्रीन टि पिउँदा हतारमा होइन वा औषधी जस्तो गरेर पनि होइन । आरमसाथ स्वाद लिएर पिउनुपर्छ । भनिन्छ, शरीरका ज्ञानेन्द्रियले यसबाट आनन्द लिन सक्नुपर्छ । चियाको रुप–रंग हेर्दा आकर्षक देखिनुपर्छ । त्यसबाट आउने बास्नाले पनि घ्रांण यन्त्रलाई आनन्दित तुल्याउनुपर्छ । सेवन गर्दा जिब्रोमा त्यसको स्वाद हुनुपर्छ । जब ग्रीन टिको चुस्की लिइन्छ, त्यसलाई मुखभित्र एकछिन खेलाउने र निल्ने गर्नुपर्छ । यसले गर्दा त्यसको स्वाद अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
Previous बढ्दो कम्युनिकेसन ग्याप
Next सबै अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द ///